ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့် ဥရောပအာရှစီးပွားရေးကော်မရှင်တို့ တွေ့ဆုံ - People Media Myanmar
Home ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့် ဥရောပအာရှစီးပွားရေးကော်မရှင်တို့ တွေ့ဆုံ
ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့် ဥရောပအာရှစီးပွားရေးကော်မရှင်တို့ တွေ့ဆုံ
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးလွင်ဦးသည် ဥရောပအာရှစီးပွားရေးကော်မရှင် (Eurasian Economic Commission) ၏ Member of Board (Minister) for Integration and Macro economics H.E. Mr. Sergey Glazyev တို့သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့တွင် မော်စကိုစံတော်ချိန် ၁၁ နာရီ တွင် မော်စကိုမြို့ရှိ ဥရောပအာရှစီးပွားရေးကော်မရှင်ရုံးချုပ်၌ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေး၌ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဥရောပအာရှစီးပွားရေးသမဂ္ဂ (Eurasian Economic Union – EAEU) တို့အကြား ပူးပေါင်း‌ဆောင်ရွက်ရေးအလားအလာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ရုရှားနိုငျငံဆိုငျရာမွနျမာသံအမတျကွီးနှင့ျ ဥရောပအာရှစီးပှားရေးကောျမရှငျတို့ တှေ့ဆုံ
ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာသံအမတျကွီး ဦးလှငျဦးသညျ ဥရောပအာရှစီးပှားရေးကောျမရှငျ (Eurasian Economic Commission) ၏ Member of Board (Minister) for Integration and Macro economics H.E. Mr. Sergey Glazyev တို့သညျ ဖဖေောျဝါရီ ၄ ရကျနေ့တှငျ မောျစကိုစံတောျခြိနျ ၁၁ နာရီ တှငျ မောျစကိုမွို့ရှိ ဥရောပအာရှစီးပှားရေးကောျမရှငျရုံးခြုပျ၌ တှေ့ဆုံခဲ့သညျ။
အဆိုပါအစညျးအဝေး၌ မွနျမာနိုငျငံနှင့ျ ဥရောပအာရှစီးပှားရေးသမဂ်ဂ (Eurasian Economic Union – EAEU) တို့အကွား ပူးပေါငျး‌ဆောငျရှကျရေးအလားအလာမြားကို ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
« အမေရိကန်က ဘလက်ဟော့ခ်ရဟတ်ယာဉ်နှစ်စင်း ခရိုအေးရှားကိုလှူဒါန်း
ကသာမြို့၌ လုံခြုံရေးယာဉ်တန်းများ သွားလာမှုကို ဟန့်ထားနိုင်ရန် ခုတ်ထားသည့် ကျွန်းပင်လဲကျ၍ ဆေး ကုရန်လာသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကျွန်းပင် ပိ၍ သေဆုံး၊ ၎င်း၏ သမီး ၃ ဦး(စိုးရိမ်ရ) ဒဏ်ရာရ »